Wayeneminyaka emingaphi uMat LeBlanc xa kwaqala abahlobo? Nantsi iminyaka yokwenyani kaJoey Tribbiani - Inkcubeko
Wayeneminyaka emingaphi uMat LeBlanc xa kwaqala abahlobo? Nantsi iminyaka yokwenyani kaJoey Tribbiani
I-sitcom yeklasikhi Abahlobo iguqukele kwi-icon yenkcubeko ye-pop okokoko kusongelwa umboniso, phantse amashumi amabini eminyaka eyadlulayo. Kule minyaka idlulileyo, ukuqhuba kwakhona kolu ngcelele kugcine abalandeli bencamathele kubalinganiswa babo ababathandayo, abadlalwe ngabadlali uMat LeBlanc, uJennifer Aniston, uCourtney Cox, uLisa Kudrow, uMateyu Perry kunye noDavid Schwimmer, abadlale ezi ndima kwii-20 zabo zokuqala.
Ngokukhawuleza ukuya kwi-2021, bonke abadlali abathandathu abaphambili baya kubonakala kunye nabahlobo: I-Reunion, 'Freinds' yokusasaza ekhethekileyo namhlanje.
imibongo emifutshane engokufa kothandekayo
Ke ukukhumbula esi siqendu sikhethekileyo, nazi i-trivia kwelinye lamalungu abathandwayo abathandwayo, uMat LeBlanc, kunye nobomi bakhe njengomdlali weqonga xa edlala uJoey Tribbiani ngo-1994.
Wayeneminyaka emingaphi uMat LeBlanc ngexesha lokufota umqhubi wenqwelomoya wabahlobo?
U-LeBlanc wayengomnye weenkwenkwezi ezincinci esetwe ngelixa wayefota umqhubi wenqwelomoya wabahlobo. UJoey wayeneminyaka engama-26 kuphela kwiXesha loku-1 leSiqendu 1.
Ngokufana nomlingiswa wakhe uJoey umzabalazo wokwenza ukuba abe ngumdlali weqonga, umsebenzi wokuqala kaLeBlanc wayejongene neemeko ezifanayo. Kodwa Abahlobo basindisa ikhondo lakhe lomsebenzi emva kokuba uthotho lwaba yinto yehlabathi.
Funda kwakhona: Iimpazamo ezi-5 eziphezulu kubahlobo osenokuba ubuphosile
Kwiminyaka engama-26, olu yayiluchungechunge lwesine uMat LeBlanc wayenze njengenxalenye yomsebenzi wakhe wokubambela. Kudliwanondlebe lwango-2017, umdlali weqonga wavuma ukuba wayephantsi ukuya kuthi ga kwi-11 leedola xa wayefumana indawo kubahlobo.
indlela yokufumana ubomi obutsha
'' Abahlobo ', xa beza ngendlela yam, yayingumdlalo wam wesine weTV- kwaye abanye abathathu basilele. Ndandinayo kanye iidola ezili-11 epokothweni ngala mhla ndaqeshwa. Kwafuneka ndibuyele umva ndifundele icandelo likaJoey izihlandlo ezithandathu. Kwakukude nokuqiniseka ukuba ndiza kuyifumana le ndima. '
Okwangoku, UJoey kwaye yonke iminyaka yobudala iye yadideka ukulandela ukusukela ababhali balo mboniso bahlala betshintsha iminyaka yabo ngokusekwe kwiinkcukacha zebali.
UJoey wayeneminyaka engama-25 ubudala kwiSizini 1 kodwa kwiXesha lesi-2 wayeneminyaka engama-28 ubudala.
Nangona kunjalo, uLeBlanc, ngoku uneminyaka engama-53, ukhulile ngeminyaka okoko wafota umqhubi wenqwelomoya wabahlobo. Ngapha koko, inkwenkwezi ngokuqinisekileyo yayijongeka njengeyona ingcono kwi-36, kwisiphelo sabahlobo.
Ukuze ufunde okungakumbi ngobomi beenkwenkwezi ngexesha lokuveliswa kwe-NBC's '90s sitcom, hlala ubukele uhlaziyo olongezelelweyo' kubahlobo: Ukuhlangana kwakhona '.
Funda kwakhona: Uyibukela njani iReunion yaBafundi kwi-UAE
9/11 hulk hogan
ungaya phi xa udikiwe
mdala kangakanani utata omkhulu v
xa uthanda umntu kodwa yena engakuthandi
ukubuza umfana ngaphandle kwesicatshulwa
ukuthatha umntu ngokungakhathali kubudlelwane